.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song ချစ်သူများသို့ အထူး အသိပေးခြင်း
Flash Song ချစ်သူများသို့ အထူး အသိပေးခြင်း
ကျွန်တော့်ရဲ့ Flash Song ဆိုဒ်ကို လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါလို့..
ခု ဒီနေ့တော့ Flash Song ချစ်သူများ ၊ ဝါသနာရှင်များကို အသိပေးချင်တာ ရှိနေပါတယ်..
အားလုံးပဲ ဒီပို့စ်လေးကိုတော့ အလေး အနက်ထားပြီး သေချာလေး ဖတ်ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော် အရင်ကတည်းက ဒါကို ကြိုပြီး စဉ်းစားမိပါတယ်..ဒါပေမယ့် မဖြစ်သေးတော့ ပေါ့နေကြတာပါ။
အဲဒါက Flash Song ကို ခုမှ စပြီး ဝါသနာပါလို့ လုပ်ကြတဲ့လူတွေ တော်တော်များများ ပြောနေကြတာပါ။
သူတို့ လိုချင်တဲ့ Flash Song လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ အဖက်တွေ ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေ တင်ပေးထားပေမယ့်
တစ်ချို့လင့်တွေက အလုပ် မလုပ်တော့တဲ့ အတွက် ဒေါင်းယူလို့ မရတာပါပဲ။ Download ဆိုတာ
ဖြစ်ဖို့အတွက် ပထမဦးဆုံး Upload ဆိုတာကို လုပ်ရပါတယ်။ ဒါကို တော်တော်များများ မသိကြပါဘူး။
အဲဒီတော့ ဒေါင်းပဲ ဒေါင်းတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးတွေ အသုံးဝင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်တွေ
တွေ့တဲ့ အခါ ကိုယ့်လိုပဲ လိုအပ်မယ့်သူ ရှိရင် သုံးလို့ ရအောင် စေတနာနဲ့ ထပ်ပြီးတော့ Share ပေး
တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးပါပဲ။ အဲဒါမျိုးကို ဝမ်းသာပါတယ်..
ဒါပေမယ့် Download လင့်ဆိုတာကလည်း hosting ဆိုဒ် အမျိုးမျိုးကနေ Upload လုပ်ပေးနေကြတာပါ။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဝါသနာရှင်တွေ အတွက်ကျတော့ Free လုပ်လို့ ရတဲ့ ဆိုဒ်တွေကနေပဲ
လုပ်ပေးရတာပါ။အဲဒီတော့ ကိုယ်တင်ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေက ဒေါင်းမယ့်လူ မရှိရင်လည်း သူတို့က
ဖျက်ပစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒေါင်းတဲ့လူ များလွန်း သွားရင်လည်း ဒေါင်းတဲ့ လင့်က
ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ခု ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ တော်တော်များများက
အရင် Double Tun ရဲ့ ဆိုဒ် www.mmflahsongs.multiply.com ကနေပြီးတော့ ပြန်ပြီး မျှဝေ
ပေးထားတာပါ။ နောက် သူ့ဆိုဒ်ကနေပဲ တစ်ခြားလူတွေလည်း ပြန်ပြီး ရှယ်ပေးနေကြတော့
ခုဆိုဒ်တော်တော်များများမှာ တင်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ အဖက်တွေက သူတင်ပေးထားတာများပါတယ်။
Flash Song လုပ်တဲ့ အဓိက ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်တဲ့ SWiSH Max 2/ 3/4အဲဒါတွေကိုတော့ နည်းပညာဆိုဒ်
တွေမှာတော့ သူတို့ ကိုယ်တိုင် Upload လုပ်ပြီး တင်ပေးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် Play & Stop Button,
SWiSH Max3နဲ့4ကို Full ဗားရှင်းဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ Patch ဖိုင်တွေဟာဆိုရင် ခုဆို ဒေါင်းလို့က
မရတော့ပါဘူး။အဲဒီ အဖက်တွေကိုတော့ Double Tun ကိုယ်တိုင် Ning ဆိုဒ်ကနေ ဒေါင်းလုပ်လင့်ရအောင်
လုပ်ပေးထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ တစ်ကယ် လိုအပ်နေတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ အဖက်တွေဟာ
ဒေါင်းရုံပဲ ဒေါင်းတတ်ပြီးတော့ ပြန်လည် Upload တင်ပေးပြီးတော့ ပြန်မရှယ်ပေးကြတဲ့အတွက် ခုဆိုရင်
နောက်ပိုင်း Flash Song လုပ်တာကို ဝါသနာပါတဲ့လူတွေအတွက် အရမ်း အခက်အခဲဖြစ်နေပါပြီ။
ကျွန်တော်က Flash Song ကို ဝါသနာ ဒီလောက်ပါလို့ ခုလို Flash Song ဆိုဒ်ထောင်ပြီး Flash Song နဲ့
ပက်သက်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ နည်းပညာတွေ တင်ပေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က Flash Song ကို
ချစ်တဲ့လူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် နောက်ပိုင်း Flash Song လောကလေး ခဏလေးနဲ့ ပျောက်ကွယ်
သွားမှာ စိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်တော့ Flash Song ကို ချစ်တဲ့ ဝါသနာ ပါတဲ့
လူတွေအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ ဒီ Flash Song လောကမှာလည်း ကျွန်တော်
အကြာကြီး နေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ် တစ်နှစ်လောက်ပါပဲ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းကိုတော့
သူငယ်ချင်းတို့ ဟိုအရင်တုန်းက Double Tun ဆိုဒ်က ဒေါင်းလာခဲ့တဲ့ အဖက်တွေ အဆင်ပြေမယ်ဆို
ကိုယ်တင်ပေးနိုင်တာကို တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ Download လင့်လေး ထုတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆီကို
ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က တင်ပေးမှာပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့ Flash Song လုပ်ဖို့
အဓိက လိုအပ်တဲ့ SWiSH Max3&4Patch ဖိုင်ကို Full ဗားရှင်းဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ Patch ဖိုင်ကိုတော့
ကျွန်တော် ရှာဒေါင်းပြီး Upload ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီးတော့ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
နောက်ထပ် Play & Stop Button ဒီဇိုင်းမျိုးစုံပါ။ 16 မျိုး ပါပါတယ်။ ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
တစ်ခြား ပျက်သွားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်နဲ့ အဖက်လင့်တွေကိုတော့ သူငယ်ချင်းတို့ မှာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်
ဒေါင်းလုပ် လင့်လေး ထုတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆီကို ပို့ပေးနိုင်မယ်ဆို ပို့ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုချင်တာပါပဲ။
ဒီနေရာလေးကို သွားပြီး ဒေါင်းကြည့်ကြပါ..ဒေါင်းလို့ မရတော့တဲ့ဟာတွေ ကို ပြောတာပါခင်ဗျာ...
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အမှားပါသွားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့......
Posted by Thurainlin at 10:05
Labels: Effect, Software, အသိပေးခြင်း
Ko Htun Linn 20 December 2012 at 01:21
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ထာတဲ့ Swf File ကို Onlineပေါ်ဘယ်လိုတင်ရပါသလဲ
Thurainlin 20 December 2012 at 03:23
SWF ဖိုင်တွေ Upload တင်နိုင်တဲ့ဆိုဒ်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းလေးတစ်ခု တင်ပေးထားပါတယ်။
http://itwebcrazyboy.blogspot.com/2012/08/flash-song_18.html အဲဒီနေရာလေးမှာ လာဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။